03/01/2019 - Page 3 sur 4 -
Fampialana voly ny ankizy : Misokatra ny tetikasa « Miz’Art »
Anisan’ny zon’ny ankizy ny milalao sy miala voly. Ho fanatanterahana izany, misokatra ny tetikasa « Miz’Art » izay entina hananganana toerana filalaovana sy fialamboly ho an’ny ankizy. Afaka mandray anjara amin’ny tetikasa ireo fikambanana samihafa, …Tohiny
Taona 2019 : Hiaka-dapa ny rock
Gadona tsy mety lefy laza. Mbola be mpankafy, ary hifandimbiasan’ny taranaka ny fankafizana azy. Aty am-piandohan’ny taona, raha mbola mamaritra ny fandaharam-potoanany ireo mpikarakara seho samihafa, dia efa fantatra fa hiaka-dapa ny rock amin’ity taona …Tohiny
Fampirantiana an’i Madagasikara : Nifarana omaly tany Quai Branly
Nanomboka ny 18 septambra 2018, ary nifarana ny 01 janoary lasa teo ny fampirantiana momba ny kolontsain’i Madagasikara tao amin’ny tranombakoka Quai Branly tany Frantsa. Vakoka sy kolontsaina malagasy 360 no hita tamin’ny fampirantiana, ka …Tohiny
Lany tsy nasiam-panovana sy tsy nasiam-panitsiana teny anivon’ny antenimieran-doholona omaly ireo lalàna fehizoro hifehy ny fifidianana eto amin’ny firenena. Niisa 54 ireo loholona niatrika ny fandaniana ireo lalàna ireo. Rehefa natao ny tsangan-tanana dia ny ...Tohiny